Ogaden News Agency (ONA) – Wali waxaa socda isbadalkii maamulada ee JOKA.
Wali waxaa socda isbadalkii maamulada ee JOKA.
Waxaa maanta magaalada Durban ee Gobolka Kwazulu Natal kafurmay abaarihii 09:00 subaxnimo shirkii sanadlaha ahaa ee faraca Durban. Shirkan oo ahaa shirkii Labaad ee faraca ayaa maanta lagu dhisay maamul cusub oo uu majaraha u qaban doono Halgame Rashiid Axmed iyo masuuliyiin kale oo shan xubnood ka kooban.
Shirkan oo lagu cabiray qorshe shaqeedkii faraca ee sanadka soo socday isla mar ahaantaana lagu dhagaystay wax qabadkii sanadka ee faraca ayaa guul ku soo dhamaaday. Shirka ayaa lagu abaal mariyay xubnihii sida wanaagsan ula soo shaqeeyay maamulka waxayna balan qaaden in sidii iyo si ka fiican ay uwadayaan dhaqadooda.
Salaadii duhur kadib ayuu maamulkii hore iyo midkii badalay galeen shir laba dhinac ah kaas oo lasameeyay xil wareejin. Waxaana si buuxda maamulka faraca u meel. Marin doona maamulka cusub. Ugu danbayntii shirkan oo warbixino, talooyin wax ku ool
ah iyo gubaabo laga soojeediyay ayaa la isla qaatay in dadaalka iyo taageerada loo hayo Halganka Xoraynta Umada Soomaalida Ogaadeeniya lalaba Jibaaro.
Xaafiiska warfaafina JOKA.